PPC + Organic = More pịa | Martech Zone
PPC + Organic = More pịa
Fraịde, Machị 30, 2012 Monday, October 12, 2015 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ọ bụ akụkụ nke aka gị, Nyocha Google emepụtala ihe omuma a iji nye ihe akaebe banyere uzo igbanwe site na onu ogugu na-agbanwe mgbe a na-achota ihe nchoputa nke ihe na-achota ya. Mekọrịta abụọ ahụ nwere ike inyere gị aka ịzụ ahịa site n'akụkụ abụọ dị iche iche… na-enye obere ala na ụlọ iji pịa peeji nke nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Ihe ọzọ kpatara ya, nke nwere ike bụrụ ihe dị oke egwu, bụ ịchụpụ opekata mpe otu onye asọmpi!
Tags: google nyochagoogle +nhazi ọkwanyocha ọchụchọakwụ ụgwọ ọchụchọkwụọ ụgwọ kwa Pịappcppc ahịaagwosert ctrserp ọkwa
Scoutmob: Ezigbo oge Mpaghara Mpaghara
Kọ Ọdịdị Data Data Mobile Na-abịanụ
Apr 2, 2012 na 10: 06 AM
O doro anya na ihe ekwesịrị inwe maka ịdebanye aha na akwụ ụgwọ n'otu ibe SERP. Nke mbụ, ọ na-eme ka onye ọbịa ahụ ruru eru. Ọ bụrụ na akara gị gosipụtara ugboro abụọ, ọ ga-adị mkpa maka mkpa nke onye nyocha ahụ. Nke abuo, o meghere ohere nke ịpị ya. Fọdụ ndị mmadụ ga-pịa mgbasa ozi, ndị ọzọ na-ele nsonaazụ organic. Ọ bụrụ na ị gosipụtara na ha abụọ ị na-adọta ụdị abụọ ahụ.